Kutenga muSicily | Absolut Kufamba
Kana zvikabuda kutenga muSicily, gadzirira kunakidzwa nekukwira uye kuenda kumba, kwako kana kwako, zvipo zvisingakanganwiki. Rudzi irworwo rwekurangarira runongotarisa, kunhuwidza kana kuravira iwo kuti atitore isu nekukasira parwendo irwo kuburikidza nenyika dzeItaly.
Chii chatinogona kutenga muSicily? Zvinhu zvakawanda, zvimwe zvekushanya uye zvimwe pasina. Muchinyorwa chedu nhasi uchaona kuti ndeapi ndangariro dzakanakisisa nezviyeuchidzo zvakanakisa iyo iwe yaunogona kuunza kubva kune ino inoyevedza uye inoshanya chiitaly chitsuwa.
1 Kwokutenga kupi muSicily
2 Zvokutenga muSicily
Kwokutenga kupi muSicily
Chekutanga zvinhu kutanga: iwe unowana akawanda evashanyi mashopu uye mazhinji souvenirs anogadzirwa kunyanya kune vashanyi. Unogona kuzvitenga, asi kana uri mumwe wevaya vanoda chimwe chinhu chakakosha kana kugara uchifunga chipo chakanakira avo vanotimirira kumba, saka unofanira kufamba zvishoma zvishoma.
Ehezve, zvinoenderana nekuti wakarongeka sei iwe nerwendo kana ukafamba wega kana muboka kana parwendo. Asi, sezvinobvira, iwe unofanirwa ibva munzira yevashanyi kuti uwane yakanakisa. Zvino, ndekupi kwatinogona kutanga kutenga? Tenda kana kwete, muzvitoro nezvitoro.
Ndizvozvo, kunyangwe kuve keteni yechitoro kune zvakawanda zvigadzirwa zvemuno uye, semuenzaniso, waini yakanakisa kubva kune vagadziri vakuru. Pane yakanaka mhaswa pakati pePalermo iyo inotengesa waini yakanaka kwazvo uye zvakare yakajairika zvinhu zvekushongedza. Vhura Lidl, Trapani, zvimwe chete. Iwe unofarira pistachio kirimu? Saka iyo yekuLidl yakanaka uye ine mutengo wakanaka.
Beyond muzvitoro kana zvitoro zvikuru iwe unogona zvakare kutora rwendo rweiyo chikafu, the matura akajairwa uye madiki kwaunogona kutenga chero chinhu kubva pabepa remuchimbuzi kusvika poda yekuwachira. Kunze kweizvi, chokwadi ndechekuti vamwe vanoita zvemuno vanoisa zvinhu zvavo pano uye kwete muzvitoro zvakakura. Ndiri kutaura nezvesausage, sosi, jamu.
Imwe nzvimbo yakanaka yekutenga ndeye musika kana musika wemuno. Iyo iri muSirakuse yakanaka, kwazvo Sicilian. Zvakawanda kuita zvekutenga zvenguva, hove kana hove, senge chizi, nzungu nezvinonhuwira. Hembe dzakachipa dzinotengeswawo. Iyo bazaars, zvimwe chete.
Kune zvitoro mumaguta ese makuru uye mamwe akavhurwa mazuva ese uye mamwe kamwe pasvondo. Mumaguta madiki misika inowanzo kurongwa kamwe kana kaviri pasvondo. Kuti uzive kana iwe uchingofanira kuenda kuhofisi yevashanyi uye wobvunza.
ari wineries imwe sarudzo kana yakafanana, wineries. Iwe unogona kutora kushanya kwemunda wemizambiringa uye wotenga mabhodhoro imomo, ayo achanyatso kudhura kupfuura mumahotera. Uye zvakare, muma winery ivo vanokudzidzisa zvirinani nezve waini uye haufanire kutenga nekuda kwekunaka kwakaita bhodhoro. Asi kana iwe usingakwanise kuita mafambiro aya edza kutenga mune zvidiki, zvisiri-zvekushanya zvitoro. Kunyangwe shanyira supamaketi, sezvatakataura pamusoro.
Chiyeuchidzo chakanaka uye zvakare chinonyanya kubatsira, kutenga bhasikiti rekutenga, rakagadzirwa nemaoko, rakakurumbira uye rakanaka mabhokisi. Izvo zvakashongedzwa nemavara mazhinji nemapompu, magirazi uye zvichingodaro, uye kune akawanda masitaera. Kumwe kutenga kunogona kuve mabota mabwe zvigadzirwa.
Rangarira kuti muSicily kune makomo maviri anoputika, Gomo reEtna riri padyo neguta reCatania uye diki iri muStromboli. Ichokwadi ndechekuti yakawanda yemigwagwa yeSicily yakavezwa nematombo makuru anoputika uye kune zvimwe zvivakwa, zvakare, umo iro ibwe remakomo muchimiro chezvidhinha rakashandiswa. Nekudaro, kune zvakawanda zvigadzirwa zvinogadzirwa neiri grey dombo, kubva zvishongo, mbiya dzekushongedza, hari ...
Iwe unofarira korari here? Zvakare zviripo pano korari zvinhu: kubva pamhete nemhete, zvakapusa kana kujekesa, kune zvekushongedza zvinhu. Ruvara rwekorari idiki pingi kana yakatsvuka kwazvo, uye kana iwe uchitsvaga yakanakisa iwe uchavawana muTrapani.
La Caltagirone zvedongo zvinonakidza. Caltagirone mumwe wemisha misere yakachengetedzwa neUNESCO, muVal de Noto. Yakanyanya baroque uye yakanyanya Sicilian panguva imwe chete, uye hari inonakidza: mbiya, magirazi, mahwendefa, mauri, matray ...
Unoda iyo zvidhori? Iyo Sicilian puppet theatre inozivikanwa, Opera dei Pupi yanga ichishanda kubvira muzana ramakore rechiXNUMX uye inoshamisa. Vaviri Catania naPalermo vane tsika yakakura uye yakasimba mundima iyi. Iyo Catania zvidhori Iwo akakura kupfuura iwo ari muPalermo, asi mumaguta ese ari maviri uchawana zvitoro zvakawanda nechipo chinonakidza kwazvo. Pane zvakawanda zvidhori zvakagadzirwa nemaoko yakanaka uye kune mitengo yakawanda.
Kana iwe uchizopfeka ngowani, izvozvi kusvinura kuri kushoma uye kushoma mufashoni, unogona kutenga yakajairika Coppola ngowani. Kana yaigara iine hukama neiyo mafia, nhasi nyaya yacho yasiyana uye kune vakawanda vechidiki vakasarudza kupfeka ngowani iyi inosetsa. kwete kweteSekuru. Ivo vakazvarwa seheti dzinoitwa nemaoko muPalermo, yemakushe tweed, asi kune anotonhorera mavhezheni, ezhizha, akagadzirwa nekotoni.
Italy haizove Itariya isina pasita yakanaka, saka yakanaka kwazvo yekutenga sarudzo iri tenga yakaoma pasta izvo zviri nyore kutakura uye kupa sezvipo. Pane mhando yakanaka kwazvo, Yemahara Terra, iyo chaizvo inouya kubva kuminda yakasunungurwa kubva mukutonga kwemafia mukufarira nharaunda dzemuno.
Muchikamu chakapfuura isu takataura nezvazvo tenga waini mumashopu kana madiki madiki. Zvakakosha, ngazvizivikanwe kuti Sicily yanga ichigadzira waini kubvira ingangoita 1500 BC saka yakave nenguva yekuzvigadzirisa uye ichipa yakanakisa.
Pane nzvimbo makumi maviri nenomwe dzinogadzira waini pachitsuwa, asi mhando dzinozivikanwa kwazvo ne Syrah naMarsala. Chisinganyanyo kuzivikanwa asi pamwe ndosaka chipo chakanaka chiri icho Nero d'Avola and the Etna Rosso. Kune vagadziri vakuru vakaita seTasca d'Amanita kana zvidiki, seCOS, inogadzira yakasarudzika uye organic maini.
Uye ndeupi shamwari iri nani yewaini kupfuura a chimedu chokoreti? Hazvina basa kana iwe ukaenda kuSicily pakati pezhizha. Pane imwe nzira yechokoreti iyo haina kunyungudika: el Monica maitiro inotengeswa mumabhawa. Ine midzi yeAztec, kubva mhiri kwegungwa, uye inogadzirwa necocoa bhinzi neshuga, ese akashandurwa kuita paste uye yakarungwa kana nemuchero, kana nesinamoni kana nekofi. Dzakaputirwa nepepa rakatetepa uye mukomana, iwe une chipo chakakura.
Pakupedzisira, muSicily mune zvakare akawanda mashopu ezvitoro, zvinhu zvakawanda zvine marzipan, asi izvo zvinotora chimiro chemandimu, cherries nemapere. Zviri pamusoro pevakakurumbira Michero yeMartorana, zvivezwa zvechokwadi, zvekuti zvinoita kunge michero chaiyo. Uye ivo havango gadzi michero chete asiwo masangweji anotaridzika kunge echinhu chaicho. Zvese zvakaputirwa nefinesse, kunge machokoreti.
Usandiudze chero chinhu, izvozvi iwe unoda kuenda kunoshanyira Sicily.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kutenga muSicily
Prati, imwe yenzvimbo dzakanakisa muRome